Bukaanadeena ... - Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Kaniisadda Falls
Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Church Falls, waxaan ku dadaalnaa inaan bixino daryeelka naxariista ugu fiican ee suurtogalka ah. Waxaan ku faannaa inaan helno shaqaale saaxiibtinimo leh, la soo dhaweyn kara, oo ka jawaabi doona su'aalaha tallaabo kasta oo jidka ah - iyo kuwa ka sarrayn doona oo dhaafi doona marka loo baahdo. Eeg oo arag waxa ay bukaanadeenu qoreen:
Mid kasta oo ka mid ah haweenkaas waa geesiyaal dhab ah, xirfaddooda iyo naxariistoodu waxay ahayd mid aad u wanaagsan.
Diirimaadkii iyo daryeelkii aan dareemay wakhtigan adag ayaa waxa ay khibradayda ka dhigtay midkii ugu wanagsanaa ee aan rajayn karay.
Haddii aad raadinayso mid ka mid ah adeegyadooda, aad ayaan ugu talinayaa iyaga, ma niyad jabin doonto.
Qof kastaa wuxuu ahaa mid aad u macaan oo fiican Labada doulas aad bay u fiicnaayeen waxayna ila joogeen waqtiga oo dhan sidaan wax weyddiistay. Kalkaalisada qaybta dambe ayaa iyaduna aad u feejignayd.
Dhammaan shaqaaluhu aad bay u fiicnaayeen. Adeegga macmiilka oo aad u xirfad badan.
Qof kasta oo ballantayda joogay wuxuu ahaa mid wanaagsan oo daryeel leh.
Kalkaalisada oo joogtay miiska soo dhaweynta - ayaa gacanta i qabatay oo ila hadashay intii aan hawsha ku jiray. Waxay ka dhigtay mid loo adkaysan karo oo aan cidlo ahayn, mar walbana waan uga mahadcelin doonaa taas.
Kalkaalisada iyo kaaliyayaasha caafimaadka: Dhakhaatiirta suuxinta waxay ahaayeen kuwo la yaab leh iyo doulas sidoo kale. C. wuxuu ahaa mid la yaab leh markii aan kula hadlay taleefanka si aan u arko qof ahaan.
Qof walba aad buu u fiicnaa. Waxay ahayd raaxo. Aad baan u walwalsanahay waxaan bilaabay inaan qoslo, waxayna ahaayeen kuwo naxariis badan oo aad u qosol badan.
Waxaan dareemay in dhammaan shaqaaluhu ahaayeen kuwo aad u saaxiibtinimo leh oo soo dhaweyn leh. Ma dareemin wax xukun ah in kastoo aan keligay imid, haddana ma dareemin cidlo. Kalkaaliyeyaasha/dhakhaatiirta ayaa aad u soo dhoweeyey sida aan u dareemay raaxo -darrada waxayna ii caddeeyeen inaanan haysan wax aan ka walwalo.
Aad bay iigu naxariis badnaayeen, aad baan ugu mahadnaqayaa daaweynta la i siiyay.